Tag: ọkwa ndị ahịa | Martech Zone
Tag: n'ji Fim
Friday, February 24, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị na ndị ụlọ ọrụ nyere ndụmọdụ nke na-ere ngwaahịa site na Amazon. Site na-arụ ọrụ na ma optimizing a ngwaahịa na peeji nke na incorporating azum na-anakọta reviews si ahịa, ha na-enwe ike dịkwuo visibiliti nke gị ngwaahịa na esịtidem ngwaahịa searches… n'ikpeazụ ịba ụba ahịa exponentially. Ọ bụ ọrụ siri ike, mana ha enwetala usoro ahụ wee gaa n'ihu na-eme ya maka ọtụtụ ndị ahịa. Ọrụ ha na-akọwapụta mmetụta nke nyocha ndị ahịa na
Otu n'ime mgbanwe kachasị dị ịtụnanya nke m kwenyere na mgbasa ozi mgbasa ozi ewetawo bụ mbibi nke akara ngosi zuru oke. Agaghịkwa atụ ndị ahịa anya izu oke… mana anyị na-atụ anya ịkwụwa aka ọtọ, ọrụ ndị ahịa, yana mmezu nke nkwa ọ bụla ụlọ ọrụ setịpụrụ atụmanya. N'ime ndị ahịa ehihie na izu gara aga na Bitwise Solutions, Onye isi ala na CEO Ron Brumbarger gwara ndị ahịa ya na Bitwise ga-emehie ihe… mana na ha ga-eme ike ha niile